ब्राजिलियन - संसारमा सबैभन्दा सुन्दर र सेक्सी महिला को एक। अचम्मको कुरा छैन, बाल हटाउने बिकनी क्षेत्र को सबै भन्दा साधारण फारम ब्राजिलियन भनिन्छ। सानो बिकनी मा समुद्र तट मा तातो जलवायु र बारम्बार सोख, यो नाजुक क्षेत्र को सौंदर्य डिजाइन गर्न commits।
ब्राजिलियन Waxing विश्वव्यापी मान्यता पाउनु भएको छ। अब कुनै पनि सना मा, तपाईं चाँडै र लगभग painlessly यो प्रक्रिया प्राप्त गर्न सक्छन्।
प्राचीन मिश्रमा भने शुक्लपक्ष थिएन एक सोच्नुहोला। अनुहार कपाल र शरीर कपाल को उपस्थिति तिनीहरूलाई वरिपरि मानिसहरूको लागि एउटा घृणा छलफल भएको थियो, त्यसैले मिश्रीहरूले र मिश्री ध्यान बरु आफ्नो खोपडी हेर्न, वा, आफ्नो अभाव।
शरीर कपाल प्रयोग हटाउने पेस्ट लागि क्लियोपेट्रा सौन्दर्य beeswax आधारमा तयार गरिएको छ। यो एक प्रोटोटाइप छ आधुनिक मोम depilation को। आविष्कारशील Nefertiti चीनी पेस्ट, आज यो shugaring प्रयोग गर्न रुचाउँछु। depilation लागि पनि मिश्रीहरूले काठ रेजिन र मह प्रयोग।
आधुनिक ब्राजिलियन कपाल हटाउने बिकनी क्षेत्र प्राचीन समयमा गरेको थियो जो कि धेरै फरक छैन। मोम या चीनी - मुख्य घटक नै हो। त्यहाँ कोमल र छाला moisturize, लोशन गर्न, पहिले र प्रक्रिया पछि छाला हेरविचार लागि ingrown hairs र अन्य साधन रोक्न थप घटक थिए।
सीधा ब्राजिलियन Waxing न्यूयोर्क मा देखा छ। Brazilyanki बहिनीहरू Padila 1987 खुलेको, तिनीहरूले प्रक्रिया को विदेशी नाम संग पूरा गर्न नयाँ अमेरिकी थाले जहाँ एक सना,।
कपाल हटाउने यो फारम को गुप्तांग भाग, को लेबिया र mezhyagodichnoy crease मा बिकिनी क्षेत्रमा बाल हटाउन, समावेश छ। ब्राजिलियन एपिलेशन को एक विशिष्ट सुविधा - पातलो पट्टी वा रेखाचित्र, मास्टर द्वारा बाँया गुप्तांग भाग मा।
यो ब्राजिलियन Waxing के हुनेछ?
के तपाईं कहिल्यै ब्राजिलियन depilation गरेको छैन भने, पहिलो प्रक्रिया पनि व्यवसायीक विश्वास गर्न राम्रो छ। भएको सना टिप्पणी cosmetologist कार्यालय आउन, यो उज्यालो र सफा हुनुपर्छ। मास्टर प्रमाणपत्र certifying प्रशिक्षण हुनुपर्छ, चिकित्सा शिक्षा यो प्रक्रिया को लागि आवश्यक छैन, तर चिकित्सा रेकर्ड आवश्यक।
ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ लागि:
डिस्पोजेबल nitrile वा Vinyl पन्जा।
मोम। कहिलेकाहीं बैंकहरू र कारतूस। यो मोम बिकनी क्षेत्र मा कपाल हटाउनका लागि प्रयोग गरिएको छ कि मनमोहक छ। उहाँले संवेदनशील छाला softens र जलन रोक्न मद्दत।
मोम लागि हीटर। कहिलेकाहीं मोम बैंकहरू र कारतूस।
को मोम लागू लागि काठ स्पाटुला।
बाक्लो Nonwoven कपडा Depilatory पट्टी।
depilation मतलब। सामान्यतया यो एक थोडा ठंडा प्रभाव छ।
depilation पछि हो। यसलाई मोम अवशेष हटाउँदछ र जलन रोक्छ।
पाउडर। क्रममा उपचार क्षेत्र देखि चिस्यान हटाउन।
"Emla"। दुखाइ लागि उपाय। यसलाई जहाँ ग्राहक धेरै संवेदनशील छाला छ अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ।
डिजाइन, सेक्विन, rhinestones लागि खाका। यदि ग्राहक चाहन्छ कठिन कुरा पट्टी वा आयत एक पूर्वानिर्धारितएकाईहरू बिना गर्न सक्नुहुन्न। चमक लागि डिजाइन आवश्यकता र विशेष गोंद झिल्काहरु।
कपाल हटाउने बिकनी लागि waxes
कपाल हटाउने बिकनी क्षेत्र को लागि waxes त्यहाँ बैंकहरू, कारतूस र गुटिकाओं छन्।
सबै भन्दा साधारण ब्रान्डहरु waxes उत्पादन कि:
Depilflax। सौंदर्य सैलून प्रयोग, यो पनि आत्म-प्रशासन लागि उपयुक्त छ।
Gigi। व्यावसायिक उपयोग उत्पादनहरु लागि।
Floresan। ब्राजिलियन depilatory मोम।
Veet। घर प्रयोगको लागि उपयुक्त, यो बैंकहरू र मोम स्ट्रिप्स को रूप मा छ।
कसरी बिकनी क्षेत्र शुक्लपक्ष सुरु गर्न?
ब्राजिलियन Waxing छाला को तयारी सुरु। प्रक्रिया अघि केही घण्टा तपाईं ज्योति साफ गर्न नुहाउनु र छाला मइस्चराइजर वा तेल हालेर आवश्यक छ।
बाल लम्बाइ कम से कम 0.5 सेमी, को मोम hairs राम्रो हुक र पहिलो तिनीहरूलाई हटाउँदछ यस्तो मामला हुनुपर्छ। यदि बारेमा वा बढी सेन्टिमिटरले, पूर्व-मास्टर podstrizhet कपाल को लम्बाइ।
यो छाला कुनै सुनिंनु, जलन र घाउ थियो कि महत्त्वपूर्ण छ। अन्यथा, प्रक्रिया छाला पुनर्स्थापना नभएसम्म, अर्को दिन हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
यसबाहेक, मास्टर इच्छित परिणाम संग निर्धारित गर्नुपर्छ। कपाल को के भाग र को गुप्तांग क्षेत्रमा के बाँकी फारममा: यो एक पट्टी, संकीर्ण आयत, त्रिकोण हुन सक्छ, वा तपाईंले सबै कपाल हटाउन आवश्यक छ। चमक टाटु वा rhinestones डिजाइन हुनेछ।
कपाल हटाउने बिकनी कसरी?
ब्राजिलियन Waxing कस्मेटिक ओछ्यान मा प्रदर्शन गरिएको छ। मास्टर ओछ्यानमा राख्नु र डिस्पोजेबल पानाहरू डिस्पोजेबल पन्जा धारण याद गर्नुहोस्। केही अवस्थामा, एक ठूलो पर्याप्त भाग छोडेर जब को गुप्तांग बाल, यस्तो त्रिकोण को रूप मा, विजार्ड डिस्पोजेबल जाँघिया प्रदान गर्दछ।
पहिलो, depilation लागू हालतमा ठंडा छाला अवशोषित गर्दा पाउडर संग छर्कियो छ हो। कस्मेटिक स्पाटुला प्रयोग गरेर तातो मोम, पातलो तह बाल विकास को दिशा मा बाल क्षेत्रमा लागू गरिएको छ। यसबाहेक, Nonwoven पट्टी हल्कासित, थिचिएको विपरीत पक्ष मा फड्को र बाल विकास टियर पट्टी विरुद्ध तीव्र आन्दोलन बाट हात छाला तान्नु, लागू गरिएको छ। को गुप्तांग क्षेत्र सुरु र बिस्तारै लेबिया हस्तान्तरण र mezhyagodichnoy गुना। समयमा depilation mezhyagodichnoy Folds, ग्राहक आफ्नो पक्षमा सुत्न आग्रह गरिएको छ।
प्रक्रिया को अन्त मा एक कस्मेटिक तेल आधार depilation पछि अवशिष्ट मोम र उपचार बेहोशि औषधि हटाउन।
दुई दिन epilation पछि सना गर्न जान सक्छ, पूल मा पौडी खेल्न, एक तातो स्नान लिन र तंग कृत्रिम अंडरवियर लगाउने।
ब्राजिलियन Waxing समीक्षा ज्यादातर सकारात्मक छ। ठीक बेचैनी पैदा गर्दैन प्रक्रिया सञ्चालन र चाँडै पर्याप्त गरिन्छ। कुनै छाला जलन र सुनिंनु रहनेछ। तीन चार हप्ता भित्र, छाला चिल्लो र राम्रो-groomed रहनेछ।
depilation लागि Contraindications:
भडकाऊ प्रक्रिया उच्च शरीर को तापमान सँगसँगै छन्।
कपाल हटाउने को क्षेत्र मा छाला गर्न क्षति।
ingrown hairs को रोकथाम
बाल दुई कारण बढ्न सक्छ शुक्लपक्ष पछि। पहिलो - यो बढ्छ वा झुकेको छ जसमा बाल, र छाला को अन्त thinning, वा epiderimisa पत्र "तोड्न" गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कारण प्रक्रिया समयमा कपाल follicle निर्देशन परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने छ र बाल एक बिट छाला मा बढ्न, नजिकै बढ्न सुरु हुन्छ।
दुर्भाग्यवश, पूर्ण रोक्न ingrown hairs लगभग असम्भव छ, तर हामी एक न्यूनतम आफ्नो संख्या घटाउन सक्नुहुन्छ।
शुक्लपक्ष पछि, ingrown hairs विरुद्ध लोशन प्रयोग गर्नुहोस्।
बारम्बार साफ लिनुहोस्। बिस्तारै छाला को माथिल्लो तह ingrowth रोक्न हुनेछ otshelushivaya। को परे पछि, आफ्नो छाला मइस्चराइजिंग क्रीम वा लोशन मा राखे।
को hairs निरन्तर बढ्न र तिनीहरूलाई धेरै जाने यस्तो shugaring वा photoepilation रूपमा कपाल हटाउने, एक फरक प्रकारको गर्न भने।
बिकनी घरमा शुक्लपक्ष (waxes किन्न के)
यो आफैलाई ब्राजिलियन बिकिनी बनाउन सम्भव छ? घरमा शुक्लपक्ष लागि यो सुट यस्तो Veet र Floresan रूपमा waxes राख्नु, सम्भव छ। मोम कम्पनी एक माइक्रोवेव ओवन र मोम स्ट्रिप्स मा reheated गर्न सकिन्छ कि एक बैंक प्रदान गर्दछ।
तपाईं पहिलो विकल्प चयन भने, त्यसपछि तपाईं जलाए प्राप्त गर्न सक्छन् किनभने बनाउन मोम को तापमान, यो एकदम तातो हुँदैन निश्चित। प्रक्रिया अघि, छाला, राम्रो सफा छ र बिकनी क्षेत्र depilation मतलब व्यवहार गर्छन्। केश 0.5 सेमी भन्दा लामो छ भने, कैंची वा Trimmer तिनीहरूलाई ट्रिम।
तपाईंको छनोट मोम स्ट्रिप्स मा गिर भने, त्यसपछि तिनीहरूले गर्न छोटो खण्डहरू मा पूर्व-कट गर्न आवश्यक छ। राम्रो न्यानो तिनीहरूको हात र, छाला लागू केश वृद्धि विरुद्ध बन्द आंसू। प्रक्रिया पछि, मोम अवशेष (यो सेटमा छ) हटाउन छाला ऊतक व्यवहार गर्छन्।
धेरै महिलाहरु आफूलाई depilation लागि ब्राजिलियन मोम प्रयोग गर्नुहोस्। उत्पादन समीक्षा overwhelmingly सकारात्मक भएको छ। को मोम जलन पैदा र राम्रो कपाल हटाउँदछ छैन। यो नकारात्मक सेल्फ कपाल हटाउने बिकनी पूरा गर्न धेरै सुविधाजनक छैन भन्ने छ।
धेरै महिलाहरु ब्राजीलियाई कपाल हटाउने मा रोक्न र उनको बिकनी-डिजाइन पूरक गर्छन्। अक्सर चमक टैटू बनाउन। झिल्काहरु एक बाक्लो तह बनेको यो तथ्याङ्कले। विभिन्न तस्बिरहरू धेरै फरक मालिकको मार्गदर्शकरेखाथप्नुहोस् छन्।
सबैभन्दा शानदार दृश्य-डिजाइन बिकनी - ढाँचा, rhinestones संग Inlaid, प्लस ब्राजिलियन depilation (फोटो तल)। यो दुर्भाग्य, यस्तो डिजाइन धेरै लामो छैन राख्छ, हार्ड काम हो, तर।
एक snub नाक र एक व्यक्तिको चरित्र
गहिरो-सेट आँखा दायाँ मेकअप सही छन्
सुशील floatation प्रक्रिया - यो के हो?
सौन्दर्य संस्थान Olkhovka मा: समीक्षा
VALERY Asratyan - पागल उपनाम "निर्देशक"
एपिलेटर Braun सिल्क Epil महिला थप सुन्दर बनाउन
प्याजको आईओओ-हाइब्रिड: तस्बिर, समीक्षाहरू, ल्यान्डिङ र हेरविचार
कुनै पनि महिला आंकडा मा पोशाक कुन शैली सिद्ध देखिन्छ?
स्मार्टफोन ग्यालेक्सी 2: निर्दिष्टीकरण, अवलोकन, फोटो र समीक्षा
दिमित्री Nagiyev: राष्ट्रियता। के राष्ट्रियता दिमित्री Nagiyev?
के तपाईं कुनै पनि अब बाँच्न चाहनुहुन्छ भने गर्छन्?
बगैचा Bauman: ठेगाना, कसरी प्राप्त गर्न